Bicapitalization - Inkcazo kunye nemizekelo yeBicaps
I-Bicapitalization (okanye i- BiCapitalization ) kukusetyenziswa kwetayela enkulu phakathi kwegama okanye igama-igama elipheleleyo okanye igama lenkampani, njenge- iPod ne- ExxonMobil .
Kwimagama ehlanganisiweyo , xa amagama amabini ehlanganisiwe ngaphandle kweemeko, incwadi yokuqala yegama lesibini ngokuqhelekileyo yilo lizwe, njengoko ku- DreamWorks.
Phakathi kweendibaniso ezininzi zokubambisa (ngamanye amaxesha ukufutshane kufutshane kwi- bicaps ) yiCamelCase , ii-caps ezifakwe ngaphakathi , i- InterCaps (mfutshane neengxelo- mali zangaphakathi ), iinqununu eziphakathi , kunye nee- middlecaps .
"Uhlobo oluthile lwe-intanethi ye-intanethi yindlela ezimbini ezisetyenzisiweyo-enye yokuqala, enye ye-medial - into ebizwa ngokuba yi- bicapitalization ( BiCaps ), i- intercaps, i-incaps, kunye ne- middlecaps . ixhaphakile:
AltaVista, RetrievalWare, ScienceDirect, ThomsonDirect, NorthernLight, PostScript, PowerBook, DreamWorks, GeoCities, EarthLink, PeaceLet, SportsZone, HotWired, CompuServe, AskJeeves
Imizekelo enzima ngakumbi iquka iQuarkXPress kunye neARMadillo Online . Ezinye zamagama amatsha zibangela ubunzima, kwiintlanganiso ezinobunzima bexesha elide zinyanzeliswayo: umzekelo, izivakalisi zingaqala ngeencwadi ezincinci, njengoko ku- eBay unomdla okanye i- iMac iyimpendulo , ingxaki ebhekene nabani ofuna ukuqala isigwebo kunye negama lomsebenzisi osezantsi okanye umyalelo wenkqubo. "
(David Crystal, uLwimi kunye ne-intanethi , ngo-2 we-Cambridge University Press, 2006)
Isikhokelo Sendlela Yomnxeba wokusebenzisa i-InterCaps
"Landela ukusetyenziswa okukhethwa ngumnikazi wegama. Ngokomzekelo:
1. Landela inkampani kunye nokusetyenziswa kwemveliso. Ukuba i-RealNetworks, Inc., ichaza enye yeemveliso zayo RealPlayer , ngoko ngulopelo omele ulisebenzise.
2. Hlonipha upelo olukhethiweyo lwamagama e-intanethi kunye nokuphatha. Ukuba umsebenzisi we-intanethi unqwenela ukuba waziwa ngokuba yi- WasatchSkier , ngoko ke kufanele uyenze.
Kwiimeko apho igama liqala ngeleta ephantsi, njenge- EWorld , zama ukuphepha ukuqala isigwebo ngelo gama. Ukuba oko akunakwenzeka, ke ke, sebenzisa ifomu echanekileyo nangona kuthetha ukuqala isivakalisi ngeteksi ephantsi. EWorld ekugqibeleni uyaluma uthuli . "
(UConstance Hale, isitayela esinobuchule: iMigaqo yeNgesi yokuSebenza kwi-Age yobudala .
I-Side Lighter ye-BiCapitalization
"Kulo xwebhu, igama eligqithiseleyo , ndincoma iCorpoNym , edibanisa i- corporation kunye nefomu yokudibanisa- (o) i-nym , ukusuka kwisiGrike i- onoma , igama. ifom, i- copro- , oku kuthetha iifesi, umquba.) Ngokwenkohliso yokuqamba igama okanye ukuqamba iqela kule nkampani , ndineziphakamiso ezibini: ukuphakanyiswa kunye ne- CapitalPains . "
(UCharles Harrington Elster, Yintoni eZwini ?: I-Wordplay, i-Word Lore kunye neempendulo kwiingxaki ezibhekiselele kwiilwimi . UHarcourt, 2005)
Ezinye iipellings: bicapitalisation
Igatya elithembekileyo Inkcazo kunye neMimiselo
I-Morph (Amazwi kunye neengxenye zegama)
I-Compromise ye-1850 yanciphisa iMfazwe yoLuntu iminyaka elishumi
Umdlalo weLizwi kwiSigaba se-ESL